Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): ပအိုဝ်းသံဃာပျိုများအဖွဲ့၏ သဘောထားတစ်ရပ်ကို အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
ထိုကြေငြာချက် စာရွက်များအား တောင်ကြီး ဟိုပုံး ဆီဆိုင် စသော
သံဃာထုအများစုကလည်း ထိုကြေငြာချက်ကို သဘောတူ လက်ခံကြ
ကြောင်း တောင်ကြီးတိုင်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်သတင်းတွင်ပါရှိသော အာဏာရှင် အဓမ္မ၀ါဒီ PNO မှ ၀င်းယဆရာတော်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍
သံဃာတော်အပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သံဃာတော်များအနေဖြင့် ကန့်ကွက်ကြပါရန်
ဗွေးသဃာင်္းတော်းသီးအ၀်းလိုးမာနဲုင်းယိုန၀်ညလဲဉ်းဗွေး ကွဲညန၀်လိုကျောင်တဲ့အားနားတ၀်းဒွုမ်က အလွဉ်နားဗွေး
နဲုင်းခွေသွဉ်းန၀်ထောက်ခံးဒျားဗွေးသင်္ဃားတော်းသီးဗွေးသြ ကွပ်ပွိုးစွဉ်းနမ်းစီပွာရေတွော့မာဗားနဲုင်းယိုန၀်ခွေသွဉ်းမဲဉ်ထီးတ၀်းဗွေးသြ ခွေသွဉ်းထွိုင်းဖတ်ထွားဗားသတင်းနဲုင်းန၀်တဲ့သတဟောဝ်တ၀်းဗွေးသြ လိုကျောင်န၀်အ၀်း
ဒီမှာက ဘာတံဆိပ်တုံးမှာလည်းမပါဘူး ဘယ်သူ့လက်မှတ်မှလည်းမပါဘူး ဘာအထောက်အထားမှလည်းမပါဘူး ဒီလောက်တော့လူတိုင်းတင်နိုင်ပါတယ် ၀င်းယကိစ္စဟာ သံဃာတော်ကြီးတွေတော်တော်များများလည်းပါ ၀င်ပါတယ် pnoပဲပါလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူး ၀ါတော်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မဟုတ်တရုတ်သံဃာပျို(လူပျိုလုပ်သံဃာ) တွေထက်တော့ သာမှာပါ .........
တင်ထားတဲ့စာမှာ တံဆိပ်တုံးလည်းမပါ လက်မှတ်လည်းမပါ ဒီလိုအတုအပစာမျိုးဟာ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်တင်တတ်ပါတယ် ဒီလိုတင်တာ ဟာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးညီ ညွတ်မှုနဲ့ အထင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဆိုတာ နားမလည်ပဲ အတွေးကျဉ်းကျဉ်းနဲ့တင်နေကြ တာဟာ သင်ဟာဘာလူမျိုးလဲ သိပ်တော့စိတ်မ ၀င်စားပါဘူး သေချာတာကတော့ စည်းလုံးညီ ညွတ်မှုပျက်ပြားအောင်နဲ့ အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးတဲ့သူပဲနေမှာ ၀င်းယရွာ ကိစ္စဟာ Pnoပဲမကပါဘူး သံဃာတော်ကြီးတွေလည်းပါပါတယ် သံဃာတော်ကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အမြင်တွေလည်းပါဝင်လို့ မှားမယ်လို့မထင်ပါဘူးပြီးတော့ အဲလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပျက်ပြားစေတတ်တဲ့ သံဃာပျိုအဖွဲ့ရဲ့စွပ်စွဲချက်ထက်တော့ ပိုသာမယ်လို့ထင်ပါတယ်
sai koko ပြောသလို တံဆိပ်တုံး မပါတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာကို အမည်မဖော်လိုတဲ့ သံဃာတစ်စုက ဖြန့်ခဲ့တာလဲ အမှန်ပါပဲ။
နေရပ်လိပ်စာ ထဲ့လိုက်ရင်လဲ pNO က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့က အာဏာကို အလွဲသုံးပြီး အပြစ်ရှာမှာပေါ့။ ဒါကိုတော့ လူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ စိုင်းကိုကိုပြောသလို သံဃာတော်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သုံးပါးထက် မပိုတာလဲ အမှန်ပါပဲ။
မပါတာလဲ အမှန်ပါပဲ။ ပါဝင်ရတဲ့ ဆရာတော်တွေ
ဆိုတာလဲ PNO က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ရဲ့ လှည့်ကွက်
ကို ခံခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီဆရာတော်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အေးစေတီဆရာတော်တို့ ဆီဆိုင်ဆရာတော်တို့ ဆိုရင် ဒီကိစ္စ စဖြစ်ထဲက ဦးသြဘာ ဘက်ကပဲ ရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့ အတိအကျ ကြားသိရပါတယ်။ အေးစေတီဆရာတော်
ထင်ရှားပြီး ပအိုဝ်းတစ်မျိုးသားလုံးက လေးစားရတဲ့
ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ပျက် အစွန်းအထင်း လုံးဝ မရှိခဲ့တဲ့
ဆရာတော်တစ်ပါးဆိုတာ ပအိုဝ်း ရဟန်း ရှင်လူ အားလုံးက သိပြီးသားပါ။ အဲဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေက ဘာကြောင့်
ဒီကိစ္စကို ကန့််ကွက်ရတာလဲ ၊ ဒီမေးခွန်းရဲ့
အဖြေကို စဉ်းစားတတ်ရင် sai koko
ပြောသလို မမှားဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
တံဆိပ်တုံး မပါတိုင်း နေရာတကာမှာ အတုလို့
ပြောလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီလိုပြောကြေးဆိုရင်
ဘာတံဆိပ်တုံးမှ မပါပါဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တံဆိပ်တုံးမှ မပါပါဘူး။
ဆရာတောတွေရဲ့ လက်မှတ်ကတော့ အစည်းအဝေး တက်ေ၇ာက်ကြောင်း စာရွက်ကနေ ကူးယူလဲ ရတာပဲ။
တကယ်လို့ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် ထိုးတယ်ပဲ ထားပါအုံး ဘာလို့ သူတို့ရဲ့
အဖွဲ့အစည်း အခွင့်အာဏာနဲ့ ဆိုင်တဲ့
အဲဒီအချက်ကိုလဲ sai ko ko အနေနဲ့
ဒီဝင်းယကိစ္စက ခုထိ ပြီးပဲမပြီးနိုင်ဘူး။
ဘေးလူအနေနဲ့ ကြည့်ရရင် နှစ်ဘက်စလုံးက အားနည်းချက် ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အများအတွက် အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ မတော်တဆ
ခလုတ်တိုက်မိတာမျိုးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးကို တစ်ဦး၊ တဘက်ကိုတစ်ဘက်၊ တစ်ဖွဲ့ကို တစ်ဖွဲ့
အနစ်နာကြီး နစ်နာရအောင်၊ ထိခိုက်ပြောဆို
ရေးသား မပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
အရင်ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သတိပြုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပအိုဝ်းတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ဒီထက်မကျဆင်းရအောင်
နွားကွဲရင် ကျားဆွဲတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။
နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတဲ့ ရွာတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို
လက္ခဏာ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။ အချိန်ကြာသွားမှ
ဒါကြောင့် ခုချိန်မှာ အတင်းအကျပ် မလုပ်သင့်ဘူးလို့
အဲလိုတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ဦးသြဘာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်စာ အစည်းအဝေး ခေါ်စာhttp://www.taunggyitime.com/2012/05/blog-post_1708.html#moreမှာ တံဆိပ်တုံးပါပါတယ် အဲဒါကြောင့် PNOလို့ပြောနိုင်တာပါ မဟုတ်ရင် စွပ်စွဲချက် အမှားတွေလို့ပြောနေမှာပါ ဒါဟာအမှန်ပါ တံဆိပ်တုံးလည်းပါပါတယ် အစည်းအဝေးလက်မှတ်ထိုးတဲ့စာရင်းမှာလည်း ရက်စွဲအတိအကျရှိနေတာမို့ လေလင်းပြောသလို ကော်ပီချလိုက်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောလိုပါဘူး အမှားအမှန်မခွဲခြားပဲ တစ်ဖက်မြင် အစွန်းရောက်ဝါဒဆိုတာတွေက အရူးတွေအလုပ်ပဲလေ .....ရှင်းရှင်းပြောချင်တာကတော့ သံဃာပျိုဆိုတာ သံဃာနာမည်သုံးပြီးပေါက်ကရလုပ်တာပဲနေမှာ ပါ အဓိကကတော့သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို နာမည်ဖျက်ချင်တာလည်းဖြစ်မှာပါ ဒါမှမဟုတ် ဆရာတော်ကြီးတွေကိုမထီမဲ့မြင်တတ်တဲ့ သံဃာ(သိုးရေခြုံထားသူ)တွေလောက်ပဲနေမှာပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမည်မဖော်လိုတဲ့သံဃာတစ်စုကဖြန့်တာအမှန်ပါပဲဆိုတာ လေလင်းက ကကနနသိနေတာမို့ပါ .
စကားတွေဟာပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ စစချင်းအပြီးမှာပဲ ကားထွက်တတ်ပါတယ် ဒါပေမဲံ့ သီတင်းတစ်ပုဒ်သုံးသပ်ချက် တစ်ခုထုတ် မယ်ဆိုရင်အရာရာကိုကကနနသိနေ ဖို့က အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်....အဝေးက သစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်သေချာမမြင်ရသလို အဝေး ကနေလာပြီးသက်သေခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့ စကားတွေဟာ အမြင်ကွဲပြားမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင် တာမို့ လက်ခံသူအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တင်တဲ့သူအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အဖြစ်ကိုမှန်မမှန် စမ်းစစ်ပြီး သက်အထောက်အထား များနဲ့ ခိုင်လုံစွာ ပတ်သက်မှုရှိနေမှ တင်ကြပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ် ဆိုက်ကိုလူတိုင်းလုပ်တတ်ပေမဲ့ သတင်းအမှန်ကို လူတိုင်းမတင်တတ်ဘူး .............မည်သည့်သတင်းနှင့်ဖြစ်နေပါစေ အမျိုးသားတစ်ခုလုံးက သိသင့်ပါတယ် ......အမျိုးသားတစ်ခုလုံးကသိသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ် ...အာဏာသုံးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ..အလိမ်အညာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေရဲ့နားကိုသာပိတ်ထားမယ်ဆို၇င် အမျိုးသားအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ နာမည်ပဲရှိမှာပါ တကယ်တမ်းမှာတော့...........
လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲလာနေတဲ့ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ ရှေးရိုးအစဉ်အလာနဲ့အတွေး အခေါ်တွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ချိန်တန်ခဲ့တာ အရမ်းကိုကြာနေခဲ့ပါပြီ အခုထိလက်ခံကျင့်သုံး နေရင်တော့မိုက်မဲတာပဲ
ခေတ်နဲ့အညိပြောင်းလဲလာနေတဲ့နိုင်ငံရေး ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အညီ လူထုတွေကလည်း နိုးကြားတက်ကြွဖို့လိုအပ်လှပါတယ် အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပါ အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင် အကြောက်တရားတွေကို စွန့်လွတ်ရမည့်အချိန်လည်းရောက်လို့လာနေပါပြီ အဲကြောင့်....လေယူရာယိမ်းတတ်တဲ့ဝါဒ ကိုစွန့်ပယ်ပြီး ကိုယ်ကိုတိုင်တွေးခေါ်စဉ်းစားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် ကောင်းတာကိုရယူပြီးမကောင်းတာကို ပယ်ခွါသင့်ပါတယ် (လူပုဂ္ဂိုလ်အပါအ၀င်) လက်မ မကောင်းရင်လက်မ ခြေမမကောင်းရင်ခြေမဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့.....မျက်နှာလိုက်ဘက်လိုက် တာတွေလည်းပစ်ပယ်ဖို့အရမ်းအချိန်တန်နေပါပြီ အားလုံးလည်းတန်းတူအခွင့်အရေးတွေရနေပြီမို့ မျိုးချစ်လူငယ်များကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ အားလုံးပဲနိုးကြားလာကြပါတော့လို့တိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်...
sai ပြောသလိုတံဆိပ်တုံးပါတယ်ဆိုတာ အစည်းဝေးခေါ်စာမှာပဲပါတာပါ အဓိကကျတဲ့ အမိန့်စာမှာ မပါပါဘူး pnoရဲ့ တံဆိပ်တုံးမပါသလို ဆရာတော်တွေရဲ့ တံဆိပ်တုံးလဲ မပါပါဘူး
လူထုတွေအတွက် တောင်ကြီးတိုမ်းအနေနဲ့ အမှန်အမှား မှန်း ခွဲခြားသိမြင်နိုင်အောင်တင်ပြပေးကြပါလို့
အင်းအဲလိုလဲဟုတ်ပါတယ် အမိန့်ချတဲ့စာတွေမှာ PNOရဲ့ တံဆိပ်တုံးမပါရင် PNOလို့တဖွဖွပြောနေကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ. ..
အပေါ်က သံဃာပျိုများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာလည်းတံဆိပ်တုံးမပါဘူးပဲလေ ဒါတွေဟာ အမှန်ဖြစ်နိုင်သလို နှစ်ခုစလုံးအမှားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်....အချက်ကျကျထောင့်စေ့ပြီး သက်သေခိုင်လုံတဲ့သတင်းမျိုးမဟုတ်တာ သေချာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းစဉ်းစားရင် သိလာမှာပါ ရိုးရိုးဦးနှောက်နဲ့ရိုးရိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တောင်ပေါ့....
လူထုတွေအတွက် တောင်ကြီးတိုမ်းအနေနဲ့ အမှန်အမှား ခွဲခြားသိမြင်နိုင်အောင်တင်ပြပေးကြပါလို့
အင်းအဲဒါလည်းဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ် အမိန့်ချမှတ်တဲ့စာတွေမှာ PNOတံဆိပ်တုံးသာမပါခဲ့ရင် PNOလို့တစ်ဖွဖွပြောနေကြတာဟာ စဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီ အပေါ်က သံဃာပျိုများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာလည်းတံဆိပ်တုံးမပါဘူးပဲလေ အားလုံးကိုခြုံပြီး ရိုးရိုးဦးနှောက်နဲ့ ရိုးရိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တောင် ဒါတွေအားလုံးဟာ သက်သေမရှိထောင့်မစေ့တဲ့ ကိစ္စတွေလိုဖြစ်နေတာတွေ့၇ပါလိမ့်မယ် ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာလဲ တိကျတဲ့အဖြေဟာဘယ်မှာလဲ ...
တောင်ကြီးတိုမ်းမှာ တင်တဲ့သတင်းဟာအမှန်တွေလား ....
တစ်ဖက်သက်ယုံကြည်နေရမှာလား... တကယ့်လူထုရဲ့ စကားကဘာလဲ သတင်းတွေနဲ့တခြားဖြစ်နေမလား
pno တံဆိပ်တုံး မပါဘူးဆိုတာ pnoထဲက လူတချို့ Pnoရဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးတဲ့ သ ဘောပါ pnoက လူအားလုံး သ ဘောမဟုတ်ဘဲ တိုးယံ ဟိန်းထွန်းတို့ နဲ့ ရင်းနီးတဲ့ ပညာဗုတ်တို့ရဲ့ အလွဲသုံးမှုပါ ဒါ ကြောင့် pno ရဲ့ တံဆိပ်မပါတာပါ pno ထဲက လူတစု ကြောင့် Pno မည်ပျက် ရတာ တော့ အမှန်ပါ
sai ရေ တ ယောက်ထဲက နှစ်ကို သုံးကိုယ် ခွဲ ရေးနေတာ မရှက်ဘူးလား လူအများကပဲ ရေးသ ယောင် ယောင် နဲ့ ဟိုအရင် ထဲက ရိပ်မိပါတယ် မင်းတို့ လူတစုရဲ့ သိက်ခါကို အ တင်းဆယ်ဖို့ လုပ်နေတာ လူထုအားလုံး သိပါတယ်
ခမ်းဟော်ခွန်ပြောတာက အမိန့်ချတဲ့စာမှာ တံဆိပ်တုံးမပါဘူးဆိုတာ ကျွှန်တော့အထင်တော့ ဒီကိစ္စဟာ PNOတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်လို့ တံဆိပ်တုံးမပါပဲဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ
PNOတစ်ခုတည်းအနေနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်မည့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထင်မှတ်မိပါတယ် အမှန်တိုင်းပြောရရင်လည်း ဒီကိစ္စဟာ သံဃာအရေးလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်အဲကြောင့် သံဃာတွေကလည်းပါဝင် ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲလိုပဲ သံဃာတွေလည်းပါဝင်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာသိမှာပါ ဒါပေမဲ့ ရပ်ရွာနေပြည်သူတွေအတွက်ပြဿနာတွေ နဲ့ သွေးကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါဝင်လာတာကြောင့် PNOအနေနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သက်ဆိုင်မှုရှိလို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ
commentကိုကြိုက်လို့ coppyဆွဲချတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ဘယ်သူကလက်ညောင်းခံပြီးနှစ်ခါရေးမှာလဲ ကောင်းကောင်းလည်းစဉ်းစားပါဦး ဘာတွေပဲပြောပြော အမျိုးသားအတွက်စကားမပြောပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုသာပုတ်ခတ်နေမယ်ဆိုရင် လူမှုရေးမသိပဲ အမျိုးသားရေးကိုပြောရာကျနေပါတယ်....သက်သေခိုင်လုံရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့နော်
အော် တော်တော်လဲတတ်နိုင်တဲ့ စိုင်းကိုကို ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေ မင်း နာမည်သုံးလေးမျိုးနဲ့
ရေးနေတာ သိသာကြီးပါ ဘယ်သူမှ သူများ
ကွန်မန့်ကို ကော်ပီ မလုပ်ကြပါဘူး အရျူးပဲ လုပ်ချင်လုပ်လိမ့်မယ်။ မင်းက ပအိုးဝ် နာမည်လဲ
မခံရဲပဲနဲ့ ပအိုဝ်းကိစ္စပြောနေသေးတယ်။ ဘယ်ရှမ်းမှ မင်းတို့စောက်ပအိုဝ်းကိစ္စကို စိတ်မ၀င်စားဘူး ငတုံးရေ
၀င်းယကိစ္စက မင်းပြောတာ အလိမ်ချည်းပဲ
ဆိုတာ တောင်ကြီးမှာနေတဲ့ ရှမ်းတယောက်အနေနဲ့ သိပြီးသား စိုင်းကိုကို
ငါတို့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ နာမည်ပျက်အောင်
မလုပ်ပါနဲ့ မင်းတို့ဘာသာ မင်းတို့ စားခွက်လုတာ
အေးစေတီဆရာတော်တို့ ဆီဆိုင်ဆရာတော်တို့ မပါတာတော့ မင်းမငြင်းရဲဘူးလေ စိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့
မင်းတို့ PNO က လူတချို့ရဲ့ အပုပ်နံ့ကို
၀င်းယကိစ္စက PNO က လူတချို့ရဲ့ မတရားလုပ်မှုလို့ ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်တဲ့
လူတချို့ကြောင့် ခမ်းဟော်ခွန် ဆောင်းပါးမှာလို
ဟိန်းထွန်းတို့ တိုးယံ တို့ ပညာဗုတ်တို့ကြောင့်
PNO အဖွဲ့အစည်းနာမည်ပျက်ရတာ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ ပြောကြပါတယ် သဲရင်းတွေရေ
နာမည်အတုတွေ လူမျိုးအတုတွေ မဖန်တီးကြပါနဲ့ ကိုယ့်ပအိုဝ်းကိစ္စ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းတွေ ဆွဲမထဲ့ပါနဲ့
စိုင်းကိုကိုရေ မင်းနာမည်ခွဲနဲ့ရေးတာ အသိသာကြီးပါ ကွန်မင့်တက်လာတဲ့ အချိန်က
အတူတူပဲလေ တကယ်သာ ကော်ပီဆိုရင်
အချိန်တူနိုင်ပါ့မလား ရှီးစားလဲ ပြောပါ ငစိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ရေ